မာဒေးရီးယားကျွန်းများသို့ခရီးစဉ် | ခရီးသွားသတင်း
အ မက်ဒီရာကျွန်းများ ၎င်းတို့သည်ကျွန်းငါးကျွန်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောပေါ်တူဂီကျွန်းစုဖြစ်ပြီးကျွန်းနှစ်ကျွန်းသာရှိသည်။ သူတို့ကအလွန်ကြီးစွာသောဖြစ်ကြသည် ဥရောပခရီးသွား ဦး တည်ရာဒီတော့သူတို့ကငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီကပ်ရောဂါကကြီးစွာသောမသိသောခံစားချက်ကိုခံစားနေရတယ်။ ဒီလည်ပတ်မှုတွေကိုဒီနွေရာသီမှာပြန်လာမှာလား မေးခွန်းကြီး
Madeira ကိုသူတို့သိသည့်အတိုင်းဖြစ်သည် ရုံ Canary ကျွန်းများမှ 500 ကီလိုမီတာ သူတို့သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးချစ်စရာကောင်းသောရာသီဥတုရှိသည်။ ဒီနေ့ကြည့်ရအောင် သူတို့ဘာတွေကမ်းလှမ်းတာလဲ၊ ငါတို့ဘာတွေမြင်တာ၊ လည်ပတ်တာ၊
2 Madeira ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်း ၅ ကျွန်းသာရှိသည်။ နှစ်ခုစည်ပင်နှင့်သုံးလူနေထိုင်မှုမရှိ။ ပထမတစ်ခုဖြစ်သည် Porto Santo နှင့် Madeira နှင့်ဒုတိယ၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပါပြီ Desertas ကျွန်းများ သို့မဟုတ်တောရိုင်းကျွန်းများ။
ကျွန်းများ၏လှပမှုနှင့်နွေးထွေးသောရာသီဥတုကြောင့်သူတို့ကိုခရီးသွားများအတွက်အမြဲတမ်းနီးကပ်စေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ထင်ရှားကျော်ကြားသော ious ည့်သည်များအကြားကျွန်ုပ်တို့သည်pressစတြီးယားမှ Empress Sissí၊
Madeira ၎င်းသည်အကြီးဆုံးကျွန်းနှင့်ကျွန်းဖြစ်သည် ၎င်း၏မြို့တော် Funchal ဖြစ်ပါတယ်၎င်းသည်ကျွန်း၏တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်အရေးပါသောမြို့တော်တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၊ အကြောင်းဖြစ်သည် မီးတောင်မူလအစနှင့်အပူပိုင်းဒေသရာသီဥတုရှိသည့်တောင်တန်းများ.
နွေရာသီသည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီးဆောင်းရာသီသည်ပျော့ပျောင်းသည်။ တကယ်တော့အဓိကကျွန်းပေါ်တွင်အပျက်အစီးများရှိသည် မူလသစ်တော သိပ်သည်းစိုထိုင်းသောနှင့်ကိုလိုနီများမရောက်ရှိမီ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ကိုလုံးဝဖုံးအုပ်ထားသော Macaronesia ၏။ ဒီနေ့isရိယာဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်။
ကျွန်းများသို့သွားသောတံခါးသည်အဓိကကျွန်းနှင့်မြို့တော်ဖြစ်သည်။ Funchal ။ ဒီမှာနေတယ် လူတသိန်း မြင့်မားသောရာသီ၌လူ ဦး ရေအများကြီးကြီးထွားလာပေမယ့်တည်ငြိမ်လမ်းအတွက်။ သင်မလွတ်နိုင်သည့်မြို့တွင်းရှိခရီးတစ်ခုမှာတစ်ခုဖြစ်သည် Velha ရပ်ကွက်လမ်းများနှင့်အိမ်ဟောင်းများနှင့်အတူအလွန်သာယာလှပသော။ Rua de Santa Maríaသည်အရောင်းအ ၀ ယ်အများဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဈေးဆိုင်များ၊ အရက်ဆိုင်များ၊
El စန်တီယာဂိုခံတပ် ၎င်းသည်ပင်လယ်၏အစွန်အဖျားတွင်တည်ရှိသောအဟောင်းဖြစ်သည် XVII ရာစု။ ဒီနေ့အတွင်းမှာစားနိုင်တယ်၊ ညစာစား, အကောင်းဆုံးရှုခင်းတစ်ခုဖြင့်ကျွန်းကိုသင်ရလိမ့်မည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့, ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဖို့ကြိုးစားပါ။
အမြင့်မှမြင်ကွင်းများအတွက်လည်းသင်ကြည့်နိုင်သည် တောင်ပေါ်သို့ကေဘယ်လ်ဖြင့်တက်ပါ နှင့်အလှဆင်သောလှပသောရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်။ မင်းကကေဘယ်လ်ကားပေါ်တက်ပြီးပုံမှန်ယက်ကတ်တောင်းထဲကိုဆင်းသွားပြီး ၁၉ ရာစုအလယ်လောက်မှာသွားမယ့်လမ်းကိုဖောက်လိုက်တယ်။
နောက်ထပ်လည်ပတ်မှုဖြစ်နိုင်သည် Lavradores စျေးကွက် ၎င်း၏ငါး၊ ပန်း၊ သစ်သီးနှင့်ပုံမှန်ထုတ်ကုန်များဆိုင်များပါ ၀ င်သည်။ ယနေ့တွင်ဤပုံမှန်ကုန်ပစ္စည်းများသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
နံနက်ခင်းနှင့်မွန်းလွဲပိုင်းတို့တွင်နေနှင့်ကောင်းမွန်သောရာသီဥတုတို့ဖြင့်သင်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည် Faja dos Padres ကမ်းခြေသဲမပါဘဲနှင့်ကျောက်စရစ်ခဲနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်ချောက်ကြားနှင့်သေးငယ်တဲ့ဥယျာဉ်နှင့်အတူ။ မင်းဘယ်လိုရောက်လဲ ကောင်းပြီ၊ ကေဘယ်လ်ကားပါ။
သို့သော်ကျွန်းအများအပြားကမ်းလှမ်းခဲ့သည် သဘာဝ -related လှုပ်ရှားမှုများဒါကြောင့်သင်နည်းနည်းလှည့်ပတ်သွားရမယ်။ ဒီသဘောနဲ့ပါ ကားတစ်စီးငှားဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကူး နှင့်ကားမပါဘဲရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြောင်းအချို့လည်ပတ်မှုလုပ်ပါ။ ဥပမာနာရီဝက်အောက်လောက်မှာလုပ်နိုင်တယ် မက်ကိုရာ၏အမြင့်ဆုံးသော Pico Ruivo သို့တက်ပါသို့မဟုတ်မီတာ ၁၈၀၀ ခန့်ရှိသည့် Pico de Arieiro သို့မဟုတ် အီရာ၏ရှုထောင့် Serrado (သင်လေထဲတွင်လမ်းလျှောက်စေသည်၎င်း၏ဖန်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ) ။ တောင်ပြတင်းပေါက်များ၊ နေရောင်တို့တွင်ကားပြတင်းပေါက်များမှတဆင့်လေသည် တိုက်၍ မောင်းနှင်နေသည်မှာသေချာသည်။
ထို့အပြင်ကားဖြင့်အခြားလမ်းလျှောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် Sao Vicente ၏ဂူများ, ဥပမာ။ ၎င်းသည်ကျွန်း၏အချက်အချာဖြစ်ပြီးသင် can ည့်သည်အတွက်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် ၏ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းခြင်းအကြောင်းအများကြီးလေ့လာပါ ကျွန်းစု။ လွန်ခဲ့သောအနှစ်လေးထောင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့သောခြောက်သွေ့သောချော်ရည်ပြွန်များကိုပင်သင်မြင်နိုင်သည်။ ကားဖြင့်ငါးဖမ်းရွာများသို့လည်းကားဖြင့်သွားနိုင်သည်။ ဝံပုလွေများ, Machico သို့မဟုတ် Canical ၏ရာစုနှစ်ချီမြို့ပြစင်တာများနှင့်စားစရာကောင်းသောနေရာများရှိသည်။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းကားတစ်စီးငှားရမ်းခြင်းကတကယ်တန်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်တန်တယ်ဆိုတာပဲ4×4ဒါမှမဟုတ် Jeep ကိုငှားပါ ပိုမိုခက်ခဲသောလမ်းများပေါ်တွင်သင်အနည်းငယ်သွားခွင့်ပြုသည်။ ဂျစ်ကားဖြင့်သာသင်အစတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် Laurel သစ်တောများ၏ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာကိုသင်ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ ကားကိုလမ်းလျှောက်ချင်ရင်မင်းလုပ်နိုင်တယ် တောင်တက်သမား Caldeirao Verde လမ်းသို့မဟုတ် 25 Fontes အားဖြင့်,4ကီလိုမီတာထက်ပိုပေမယ့်7ထက်နည်းနှစ်ခုလုံး။
သငျသညျကျွန်းများကိုစဉ်းစားသလားနှင့်ကမ်းခြေစဉ်းစားပါသလား ကောင်းပြီမင်းကိုနည်းနည်းကောင်းကောင်းစိတ်ပျက်မိတာစိတ်မကောင်းပါဘူး Madeira အထူးသဖြင့်၎င်း၏ကမ်းခြေများအတွက်လူသိများသည်မဟုတ်။ ၎င်း၏ပထဝီဝင်သည်၎င်း၏ကမ်းရိုးတန်းထက် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ သော်ငြားလည်း ကမ်းခြေအချို့ရှိပါတယ် သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသော, သဘာဝရေကန် နှင့်အတု။ ၏သဘာဝရေကန် Porto Moniz ဥပမာတစ်ခု။ နေနှင့်ရေတစ်ရက်အဘို့ထိုအရပ်၌သူတို့ကိုရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဒေသခံများခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဝိုင်းရံထားတဲ့ကမ်းခြေကိုယ်တိုင်ကအပေါ်မီးတောင်ကျောက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရေကန်များဖြစ်ကြသည်။
ဒါကကမ်းခြေပေါ်မှာ, ပင်လယ်၌အစဉ်အမြဲအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ ဝေလငါးနှင့်လင်းပိုင်တို့ကိုကြည့်ပါ သင်တို့မူကားတယောက်မျှမကြွင်း၊ သင်ရုံဆိပ်ကမ်းကိုသွားနှင့်ခရီးစဉ်များအတွက်စာရင်းသွင်းရန်ရှိသည်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူမင်းက Madeira ကိုမင်းရဲ့လည်ပတ်မှုအများဆုံးကိုရနိုင်တယ်လို့ပြောလိမ့်မယ် ပြီးနောက်, ဟုတ်ကဲ့, အစဉ်အမြဲ အခြား Porto Santo ကျွန်းကိုသင်ခုန်ကူးနိုင်တယ် သို့မဟုတ် ရွှေကျွန်း, ဤအချိန်ဟုတ်ကဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကမ်းခြေနှင့်အတူs, ရွှေနှင့်ကြည်လင်သောရေနှင့်အတူ။ အကယ်၍ Madeira သည်လှုပ်ရှားမှုများကိုကမ်းလှမ်းပါက Porto Santo သည်အပန်းဖြေရန်ကမ်းလှမ်းသည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်သင်၏ခရီးကိုမကြိုးစားပဲရပ်။ မရပါ ဒေသဆိုင်ရာ gastronomy, အ အမဲသား skewersအဆိုပါ ငါး y ပင်လယ်စာ o မင်္ဂလာပါ, ဒေသခံဘရန်ဒီ, သံပုရာ, သကြားနှင့်ကြံ၏သောက်စရာ။ ထိလျှင်? ရှာတွေ့သည်။ အမှန်တရားကတော့မာဒေးရားဟာခရီးသွားနေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ကမ်းခြေ၊ ပင်လယ်နှင့်အနားယူရာနေ့ရက်များနှင့်အတူလေ့လာရေးခရီးများ၊ နေထဲတွင်လှုပ်ရှားမှုများ၊ လှုပ်ရှားမှုများစွာပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကားတစ်စီးကိုငှားလျှင်၊ သင်သည်ခရီးကို ပို၍ ပျော်မွေ့လိမ့်မည်၊ သင်လည်းအရက်ဆိုင်များသို့ထွက်သွားလျှင်၊ ပိုက်ဆံအလုံအလောက်ရှိပြီးပင်လယ်မြင်ကွင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောတည်းခိုခန်းတစ်ခုအတွက်သင်ငွေပေးနိုင်သည်ဆိုလျှင်သင်ပင်ကျွန်ုပ်မပြောပါ။ ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » ပေါ်တူဂီ » Madeira ကျွန်းများသို့သွားပါ